ROCPLEX Melamine iBhodi i ngamaplanga ngobunjineli ezikumgangatho ophezulu kunye nokusebenziseka, lisetyenziswa kakhulu indlu umhombiso, ikhabhathi imveliso, imveliso ifanitshala njl
Yipaneli esekwe kwiplanga elenziwe ngobunjineli, ngakumbi ilungele ukusetyenziswa kushishino lokwakha ngeenjongo zokwakha okanye ezingezizo ezokwakha.
I-ROCPLEX yokuPakisha iplanga ngamaplanga okupakisha ngomgangatho ophezulu kunye nokusebenziseka, isetyenziswa ngokubanzi kwipallet, ibhokisi yokupakisha, ukwakha udonga, njl.
I-ROCPLEX Medium Density Fibreboard (MDF) linqanaba eliphezulu, izinto ezidityanisiweyo ezenza ngcono kunokhuni oluqinileyo kwizicelo ezininzi.
I-ROCPLEX Ukusebenza okuphezulu okuzinzileyo okuzinzileyo kwimithi, i-ROCPLEX's Laminated Veneer Lumber (LVL) imiqadi, iintloko kunye neekholamu zisetyenziselwa usetyenziso lwesakhiwo ukuthwala imithwalo enzima ngobunzima obuncinci.
I-ROCPLEX HPL zizinto zokwakha ezingangenwa ngumlilo zokuhombisa umphezulu, ezenziwe ngephepha lekraft phantsi kwenkqubo yokuntywila kwe-melamine kunye ne-phenolic resin. Izinto eziphathekayo zenziwe ngokushisa okuphezulu kunye noxinzelelo.
I-ROCPLEX Ifilimu ejongene neplywood yiplanga lomthi onzima elikwiphepha eliphezulu eligutyungelwe yifilimu ephathwe nge-resin ejika ibe yifilimu ekhuselayo ngexesha lokuvelisa.
Izikhumba zeminyango yeROCPLEX malunga neepesenti ezingama-80 zesimbo sokubumbela esinazo, sinokwanelisa phantse zonke izicelo zabathengi ngokubhekisele kwiindidi eziqhelekileyo zeenkuni kunye nombala owenziwe ngokwezifiso kwiROCPLEX® yethu yeZikhumba.
I-ROCPLEX Pine plywood ngesiqhelo yimveliso ekumgangatho ophezulu eza nge-4 "x 8" emacala asemacaleni ebakala elwandle kububanzi obuqala ukusuka ku-⅛ "ukuya ku-1".
I-ROCPLEX eguqa iplywood ekubumbeni oyifunayo.
Yongeza uyilo olutsha kwiiprojekthi zakho zeenkuni nge-ROCPLEX Bending Plywood.
Ifilimu yeRocplex Antislip ejongene neplywood
I-ROCPLEX ye-antislip plywood yinto eyomeleleyo ye-100% ye-birch plywood egalelwe ukomelela, ukunganyangeki kunye nokuqina okunxibe i-phenolic film coating.